Mashruucii Biyo Fidinta Xunboweyne Ee Fashilmay Xaguu Ku Danbeeyey?Lacagta La Lunsaday Ayaa Ka Badan $165million Dollar
(Hadhwanaagnews) Friday, September 14, 2018 09:46:22
Waxaana Mashaariicdan mar kasta laga fuudhyeelaayey dib u habeynta iyo fidinta biyaha Caasimada Hargeisa
Somaliland ma ku sii Jiri doontaa musuq-maasuq iyo maal-urursiga xadhkaha goostay, balan qaad been ah iyo khiyaamo joogto ah . Waa in dawladnimadu shaqeysaa oo la helaa cid loo maxkamadeeyo cidii lunsatay lacagtan tirada badan ee hoos ku taxan. Lacagtani may marin nidaam xisaabadeed dawladeed oo hufan, lagumana bixin shuruuc maaliyadeed iyo xeerarka qandaraasyada qaranka ee dhawaan la ansixiyey.
1- Dawlada Khaliijka ( UAE) ayaa ku deeqaday JSL lacag gaadhaysa $30 Million oo dollar si biyaha loo fidiyo
2- Midowga Yurub ( EU ) ayaa 2011-kii JSL ugu deeqay $27.5 Million si loogu balaadhiyo biyo gelinta 4-ta magaalo ee waaweyn oo Caasimada Hargeysi ugu horeyso.
New Roman";"> ( EU ) ayaa 2012 kii inoogu deeqay $64 Million doolar si loogu horemariyo 9 mashruuc oo mashruuca ugu balaadhnaa uu ahaa $8.5 Million dollar loona qoondeeyey biyo balaadhinta iyo horumarinta biyaha Caasimada Hargeisa
4- Waxaa iyana isla Sanadkaa qorshe howleedkii higsiga qaranka ( Somaliland Development plan 1) ee 2012-2016 biyo balaadhinta biyaha dalka loo qoondeeyey lacag dhan $28 Million oo dollar oo biyo fidinta caasimadu ugu horeyso.
5- Dawlada Jarmalku waxay biyo fidinta Caasimada Hargiesa ku deeqday $ 23 Million oo dollar
9- Markii sedexaad dhawaan midowga yurub ( EU ) markuu ka yaabay mashruucan aan dhamaaneyn wuxuu ku yaboohay lacag dhan $15 Million in ay ku baxayso dhameystirka biyo fidinta mashruuca xunbo weyne si Caasimadu ay mar uun biyo ku filan uhesho.
10- Hayada African Water Facility oo loo soo gaabiyo (AWF) ayaa iyna ku deeqday 3 Million Euro
11- Baanka Horumarinta Africa oo loo soo gaabiyo ( AFDB) ayaa isna biyo gelinta JSL ku bixiyey lacag dhan $ 8.5 Million dollar. Total ka lacagtaas kor ku taxan ayaa noqonaysa $165 Million oo Dollar taas oo loo qoondeeyey in ay soo af jarto lacagtaasi Qorshe hawleedyadii horumarinta biyaha Somaliland ee 5-ta sanadood (2012-2016 ) Waxaana Mashaariicdan mar kasta laga fuudhyeelaayey dib u habeynta iyo fidinta biyaha Caasimada Hargeisa iyo nawaaxigeeda oo ilaa iyo maanta biyo la'aan badani ka jirto taa soo ay shacabka reer Hargeisa is weydiinayaa meesha ay martay lacagtaa Malaayinka Dollar ka ahi iyo cidii lunsatay?
Maxay ka tidhi Mashruucan Fashilmay Xukuumada Cusubi ?
1- Kut'e mashruuca 1aad ee magaciisa la yidhaa (HUWSUP ) waxay EU ku maalgelisay lacag dhan $15 million Euro ah. Waxaa sanduuqa horumarinta ee SDF isna mashruucan ku maalgelisay lacag dhan $11 million dollar waxaana mashruucaa fulintiisa loo xil saartay markii la kala shakiyey hayada UN Habitat waxaana shaqada mashruucaa si aan loo musuqmaasuqin dusha ka ilaalinaaya Shirkad Jarmal ah oo la yidhaa (FITCHNER ) hadaba shacabka reer Somaliland waxay is weydiinayaa meesha uu mashruucani ku danbeeyey ? Mise wuxuu isna noqday aan ka fuudee alow fiihaa ... !!
2- Lay'e mashuuca 2aad oo isna Hargeisa Gudaheeda ka socda waxaa lacag gaadhaysa 23,500,000 Million oo Euro ku bixiyey Banka Horumarinta Dawlada Jarmalka waxaana shaqada mashuruucan gancanta ku haya shirkad Jarmal oo la yidhaahdo CES? Hadaba su'aashu waxay tahay xaguu marayaa mashruucaasi? oo isna mudadiisii dhaafay ? Goorma ayaa Hargeysi biyo ka helaysaa ?
3- Kuy'e Shirkada Coca Cola international waxay iyana ku deeqday biyo balaadhinta lacag dhan $5 Million oo dollar waxaana ay gacanta u gelisay shirkad Talyaani ah oo la yidhaa TS shirkadaa oo magaalada dhexdeeda kawada taangiyo dhaadheer? ilaa iyo maanta ummadda uma cada meesha ay howshaasi marayso iyo goobta iyo goorta ay biyo ka heli doonaan reer Hargeysa.
4- Mashruuca Xunbo-weyne waxaa maalgelisay hayada UAE u qaabilsan Horumarinta ee loo yaqaan Khalifa Foundation waxaana howshaa u qabilsanaa nin la yidhaahdo Mr Falaax Al-Axbaabi, waxaana mashruucaasi loo qaybiyey laba weji oo kala ah:
A) in Ceelasha la qodo. B) In baraagaha la qodo oo beebabka la dhigo. Waxaa markiiba fashilmay wejigii kowaad ee ahaa in Ceelasha la qodo. Hadaba su'aashu waxay tahay yaa loo raacayaa oo loo soo qabtay mashuuracan baaxada leh ee fashilmay? ma Khawaajigii Al-Axbaabi ayaa laga dabo tegayaa oo loo maxkamadeynayaa? Mise xaalku wuxuu ahaa qaado aan qaatee !!
5- Mashruuca 2-aad ee Biyo balaadhinta Caasimada Hargiesa wuxuu ahaa Mashruuca ka socda Geed-deebleh iyo Hori-haatley. Waxaa mashruucan ku midoobay World Bank, German Bank, SDF, EU iyo Shirkada Coca-Colla. waxaana mashruucan lagu maalgeliyey lacag dhan $79 Million dollar. mashruucan waxaa hawshiisa wada hayada UN-habitat waxaana ay aheyd in uu mashruucani uu isna dhamaado Bisha Janaayo ee sanadkan 2018 ilaa iyo hadana muu dhamaan xukuumaduna kama ay jawaabin mashaariicdan hantida badani ku baxday halkii ay ku danbeeyeen iyo cida lunsatay lacagihii loo qoondeeyey ee lagu dhameystiri lahaa.
Guntii iyo Gebo gebadii qormadan : Anigu daaha kama rogin ee dadkuba wuu arkaayaa ! Shacaboow tiraa kaa gedmane wax isu geygeyso -Mashruucan baaxada leh ee musuqa badan dugsanayaa hawshiisu waxay u taalaa xukuumada talada haysa ,gaar ahaan Hanti dhowrka guud ee qaranku in uu baadhis dhameystiran geliyo oo uu hawshiisa dastuuriga ah ka guto.